Malunga nathi-I-NINGBO MINGYU YOKWENZA IMVELISO YOKWENZA I-CO., LTD
Ngomxholo othi "uMthengi ophakamileyo, ukuthembeka okusekwe", samkela ngobubele ukuba usityelele kwaye uthethe malunga neshishini nangaliphi na ixesha!
I-MINGYU MOLD inamava ekuyileni nasekuveliseni iintlobo zeeplastikhi zeplastiki ukusukela ngo-1998.
I-MINGYU MOLD ijolise kuguquko oluzenzekelayo, isixhobo sokubumba sasekhaya, ukubumba kwendlu, ukupakisha ukungunda, ulungelelwaniso lokulungisa, njl.
Mingyu ngumngundo ayenzi ukwenza ukungunda kuphela kwimarike yaseTshayina, kodwa wenze uyilo sokubumbela nokwenza amazwe ahlukeneyo, anjenge, Israel, Poland, Czech, Turkey, Indonesia, Malaysia, USA, Mexico, Colombia, Peru, njl.
Umgangatho wolawulo lwe-MINGYU MOLD kunye nenkqubo yolawulo oluchanekileyo, kwaye ugcine utyalo-mali lwezixhobo ezifanelekileyo, ezinje nge-CNC, umatshini wokugaya isantya esiphezulu, umatshini wokukrola okhawulezayo, umatshini wokugaya, i-EDM, njl.
Ukwaneliseka kwabaxhasi kunye nokuthembela kukukhuthaza imizamo yethu eqhubekayo. Ukukhangela phambili ekwakheni intsebenziswano ixesha elide nawe!
IPROJEKTHI YAKHO, INKQUBO YETHU
Uhlalutyo lweMveliso kunye noYilo
IMINGYU MOLD inokunceda abathengi ngohlalutyo lwemveliso kwaye bacebise. Singenza umzobo we-2D / 3D wemveliso ngokweesampuli ezifunyenweyo okanye uyilo lwesiko ngokweemfuno zabathengi.
Iqela lokuthengisa lobungcali le-MINGYU MOLD liya kucaphula ixabiso lokungunda ngaphakathi kweeyure ezingama-24 emva kokufumana ulwazi olunzulu kubathengi. Ulwazi lwenkcukacha luya kubandakanya ikowuteshini, njengokucebisa isinyithi sokubumba, uhlobo lwesango, inombolo yomngxunya, njl.
Emva kokuqinisekisa iodolo kunye nokufumana intlawulo kwangaphambili, iqela lethu lobuchule loyilo liya kuhlalutya ubume besikhombisi kunye noyilo lokungunda kwiintsuku ezi-5. Siya kuthumela 3D imizobo sokubumbela ukuba itshekishwe yoMthengi.
Emva kokuqinisekisa imizobo nokuvunda, siza kuqalisa ukwenziwa nokuvunda, kwaye siya kuthumela abathengi iingxelo inkqubela veki nganye.
Uvavanyo lokuVavanya komngundo kunye neMveliso yeVolumu esezantsi
Emva kokuba senziwe kwaye sihlanganisiwe, siya kwenza uvavanyo lokungunda ngezinto eziyimfuneko zeplastikhi yomthengi, kwaye sithumele iisampulu zovavanyo kubathengi bokujonga. Imveliso yevolumu ephantsi iyamkelwa ukuba umthengi uyafuneka.
Emva kokuba ukungunda kugqityiwe kunye nokwamkelwa kwabathengi ziisampulu, siya kupakisha ukungunda kunye nebhokisi yomthi yokuthumela esemgangathweni, kwaye sithumele kubathengi ngomoya okanye elwandle.